talwinsuccess-hobbyit အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ......: February 2012
Posted by talwinsuccess at 2:20 PM0comments
Posted by talwinsuccess at 2:02 PM0comments
TeamViewer ဖြင့် နိုင်ငံတွေခြားနေတဲ့ ကွန်ပျုတာအချင်းချင်း ပြုပြင်ပေးခြင်း
TeamViewer ဆိုတာ အင်တာနက်ကွန်နရှင်ထဲမှာရှိနေပါစေ နိုင်ငံတွေခြားနေလည်း ကွန်ပျုတာ တစ်လုံးကနေ တစ်လုံးကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးလို့ရတဲ့ software လေးပါ။
အသုံးချဖို့က software ကိုအရင် download လုပ်ထားပါ။
DownLoad (FileSize = 7.97MB) >>
ပြီးရင် download ချထားတဲ့ rar ဖိုင်လေးကို ဖြည်ပြီး TeamViewer ဆိုတဲ့ application လေးပေါ်နှိပ်ပြီး run ပါ။
ဒါဆို အပေါ်က ပုံအတိုင်းပေါ်လာပြီး ခဏနေရင် Your ID ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဂဏန်းလေးတွေပေါ်လာမယ်။ ဥပမာ - 354 525 212
password ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ဂဏန်းလေးတွေပေါ်လာမယ်၊ ဥပမာ - 5100
ဒါတွေက ကျနော်နမူနာအနေနဲ့ ရိုက်ပြတာနော် ကျနော့ ID ထင်ပြီး သုံးမကြည့်နဲ့ဦး
အဲ့အတိုင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ့် သူငယ်ချင်းကိုလည်း ဒီ program လေးကို download လုပ်ဖို့နဲ့ run ထားဖို့ပြောပါ။
ပြီးရင် သူ့ဆီမှာလည်း Your ID တို့ Password တို့မှာ ဂဏန်းလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင် Your ID နဲ့ Password ကိုတောင်းပါ။ ရပီဆိုရင် သူငယ်ချင်းကပေးတဲ့ Your ID ဆိုတဲ့ ဂဏန်းကို Partner ID မှာထည့်ပြီး Connect to Partner ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါမျိုးလေး Password တောင်းတဲ့ box ပေါ်လာရင် သူငယ်ချင်းဆီက တောင်းထားတဲ့ Password က ဂဏန်းကိုဖြည့်ပါ။ပြီးရင် Log On ကိုနှိပ်ပါ။ အခုဆိုရင် ရပါပီ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းရဲ့ ကွန်ပျုတာ Screen က ကိုယ့်ကွန်ပျုတာမှ ပေါ်လာပြီး သူငယ်ချင်းရဲ့ ကွန်ပျုတာမှာဖြစ်နေတဲ့ ကွန်ပျုတာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ Website ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာအခက်အခဲတွေကို ကူညီပေးနိုင်ပါပြီ။ ကွန်ပျုတာ Computer Maintenance လုပ်ငန်းတွေကို လည်းကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ကွန်ပျုတာနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ website နဲ့ပါတ်သတ်လို့ အခက်အခဲ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ အကူအညီလိုတဲ့အခါ၊ ကိုယ်က ကူညီပေးရမယ့်အခါ အဆင်ပြေပီပေါ့ဗျာ။ ကျနော်လည်း အဲ့လိုနေရာတွေမှာ သုံးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ကိုယ်နဲ့ မရင်းနှီးမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုတော့ ဒီ နည်းပညာကို သုံးပြီး အကူအညီမတောင်းမိပါစေနဲ့ တကယ်ကိုလိုအပ်လို့ အကူအညီတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့် personal နဲ့ပါတ်သတ်တာတွေအကုန်ပိတ်ထားပါ။ gmail ,gtalk နဲ့ တခြား မသိစေချင်တဲ့အရာတွေကိုပေါ့။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့် ကွန်ပျုတာကို သူများကိုပေးသုံးထားသလို ဖြစ်နေမှာမို့ပါ။ ကျနော်တို့ကတော့ ရင်းနှိးတဲ့သူအချင်းချင်း ကူညီစရာတစ်ခုခုရှိတဲ့အခါမှာ သုံးဖြစ်ပါတယ်။
Posted by talwinsuccess at 5:26 PM0comments
၅၀၃။ Gmail နဲ့Mobile ( SMS )massage free ပို့ မည့်နည်းလမ်း
ဘလော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ!!! ကျနော်ဒီနေ့ တင်ပြဆွေးနွေးဖြန့် ဝေပေးမည့် နည်းလမ်းလေးကတော့ မိတ်ဆွေများ အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. အွန်လိုင်းကို အသုံးပြုနေတဲ့ မိတ်ဆွေ များအားလုံး ၊ Gmail ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိရဲ့Mobile phone ဟာ credit မရှိတော့လို့ အရေးကြီးဖုန်းကိုခေါ်ဆိုလို့ မရရင်သော်၎င်း၊ မိမိခေါ်ဆိုမည့်တစ်ဘက်လူရဲ့ Mobile phone ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခေါ်ဆိုလို့ မရခဲ့ရင်သော်၎င်း အဲဒီလိုပြဿနာများကို online gmail သုံးနေစဉ်အတွင်း SMS ( massage ) ပို့ နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်. မိမိမှာ Mobile phone မရှိတဲ့ မိတ်ဆွေများ အနေနဲ့ ပါ နီးဆက်ရာ ဖုန်းတစ်လုံးလုံးကို ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့SMS ပို့ ပြီး အကြောင်းကြားနိုင်တဲ့အတွက် ကျနော့်ဘလော့မိတ်ဆွေများအတွက် အထူးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့နည်း လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်.ယနေ့ ခေတ်မှာ internet နှင့် Mobile phone တွေကို လူတိုင်းလိုလိုအသုံးပြုလာကြပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုတင်ပြတဲ့နည်းလမ်းလေးကို လူတိုင်းသိရှိထားစေချင် ပါတယ်.ကျနော်ညွှန်းနေတာနဲ့ စာတော်တော်ရှည်နေပြီလားမသိဘူးနော်.စလိုက်ကြရအောင်...
step | 1 | မိမိ GMAIL ACCOUNT ကိုဝင်ပါ၊
step |2| setting ကိုသွားပါ။
step |3| အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ပေါ်လာရင် ဝိုင်းထားတဲ့ Labs ကို သွားလိုက်ပါ။
step|4| အောက်ကပုံလေးအတိုင်း SMS (text messaging) in Chat ကို ဝိုင်းထားတဲ့ အတိုင်း Enable အဖြစ်ထားလိုက်ပြီး Save Changes လုပ်လိုက်ပါ။
step |5| အထက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးသွားရင် Chat and SMS အောက်ကအကွက်မှာ အကောင့် မိမိ ရဲ့အခြား အကောင်း တစ် ခု ခုရေးပြီး အောက်ကပုံလေးအတိုင်း သွားလိုက်ပါ။
step |6| အပေါ်က Send SMS ကို click လိုက်ရင် အောက်ကပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. မိမိပို့ ချင်တဲ့ လူရဲ့ နိုင်ငံ၊ ဖုန်းနံပါတ် ကိုသေချာရေးပြီး SAVE လိုက်ပါ။
step |7| အခုဆိုရင်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပါပြီ . သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီကို SMS ( massage ) စပို့ ပါမယ်. မှတ်ချက် ဒီဖုန်းကိုတော့ မိတ်ဆွေများ မဆက်ကြပါနဲ့ကျနော်ပြန်မဖြေပေးနိုင်ရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာမို့ လို့ ပါ၊ ဒီနည်းလမ်း ကတော့ သူ့ ကိုအသုံးပြုပြီး SMS ပို့ မယ်ဆိုရင် SMS credit : 50 ပေးပါတယ်. အကြိမ် ( ၅၀ ) ပို့ လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်. ချွေတာလို့ ရအောင်တစ်ခါထဲပြောလိုက်ပါ။
step | 8 | အားလုံးပြီးသွားပါပြီ ဘလော့မိတ်ဆွေများ စမ်းသက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက်၊ ။အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ဖုန်းလိုင်းကဒ်များကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by talwinsuccess at 1:59 PM0comments
၁။ အရင်ဆုံး Control Panel ဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင် ညာဘက်က အပေါ်မှာ Category မှာ ကလစ်ပြီး Large icons ကို ကလစ်လိုက်ပါ
၂။ BitLocker Drive Encryption ကိုရှာပါ တွေ့ရင် ကလစ်လိုက်ပါ
၃။ ကိုလော့ချင်တဲ့ Disk Drives ကိုရွေးပြီး Turn on bitLocker ကို ကလစ်လိုက်ပါ
၄။ ပေါ်လာမယ့် ဝင်းဒိုးမှာ Useapassword to unlock the drive ကို အမှတ်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ
၅။ Type your password: နဲ့ Retype your password: မှာ password ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ နှစ်ခုလုံး အတူတူဖြည့်ပေရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုလိုတာက (Type your password: မှာ 123456 ဆိုရင် Retype your password: မှာ 123456) အဲ့လိုဖြည့်ပေရမှာဖြစ်ပါတယ် password ကတော့ ကိုမှတ်ရလွယ်တဲ့ password ဖြည့်လိုက်ပါ ကြိုက်တာဖြည့်နိုင်ပါတယ် မမေ့ဖို့လိုပါတယ် မေ့နေရင်တော့ ......? သိတယ်နော်
၆။ ပြီးရင် Next ကိုကလစ်ပါ ပြီးရင် Save the recovery key toafile ကို ကလစ်လိုက်ပါ
၇။ Text Files လေးကို ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ သိမ်းလိုက်ပါ Save ကိုကလစ်ပါ ပြီးရင် Next ကိုကလစ်ပါ
၈။ ပေါ်လာမယ့် ဝင်းဒိုးမှာ Start Encrypting ကိုကလစ်လိုက်ပါ Encrypting လုပ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
Encrypting လုပ်နေတာပြီးအောင်စောင့်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ အိုကေပြီပေါ့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော် ကြိုပြီးတော့ Unlock Drive သော့ပြန်ဖြုတ်တဲ့ နည်းပါရေးပေးလိုက်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ Lock ချတဲ့နည်းပြောပြီးရင် Unlock ပြန်ပြီးဖြုတ်တဲ့ နည်းလေး ပြန်မေးလာမှာ သေချာလို့ပါ ဒါကြောင့် တစ်ခါတည်း ရေးပေးလိုက်ပါတယ် ဖြုတ်ချင်တဲ့ Usb ကိုထိုးလိုက်ပါ ပြီးရင် အောက်ကအတိုင်း လိုက်လုပ်ပါ။
၁။ Control Panel ပြန်ဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင် ညာဘက်က အပေါ်မှာ Category မှာ ကလစ်ပြီး
၂။ Large icons ကို ကလစ်လိုက်ပါ ပြီးရင် BitLocker Drive Encryption ကိုရှာပါ တွေ့ရင် ကလစ်လိုက်ပါ
၃။ လော့ပြန်ဖြုတ်ချင်တဲ့ Disk Drives ကိုရွေးပြီး Unlock Drive ကို ကလစ်လိုက်ပါ
၄။ ပေါ်လာမည့်ဝင်းဒိုးမှာ ကိုပေးထားတဲ့ password ပြန်ဖြည့်ပြီး Unlock ကိုကလစ်လိုက်ပါ
၅။ ပြီးရင် ခုဏကနေရာမှာ Turn Off BitLocker ကိုကလစ်လိုက်ပါ Turn Off BitLocker ဆိုတဲ့ ဝင်းဒိုးပေါ်လာပါမယ် အဲ့မှာ Decrypt Drive ကိုကလစ်လိုက်ပါ Dectypting လုပ်နေတာကို ပြီးအောင် စောင့်လိုက်ပါ။
အကယ်၍ Usb ထိုးလိုက်ပြီး (Auto Run သို့မဟုတ် My Computer) ကနေဝင်ပြီး သော့ဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အပေါ်က (၃။) နဲ့ (၄။) အတိုင်း လိုက်လုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး တခါတည်း (၅။) ကအတိုင်းလုပ်လိုက်ပါ ကဲဗျာ ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပြီလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် သေချာဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်ပါ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Posted by talwinsuccess at 3:22 PM0comments
မကြာခင်ရေးသားပြီး တင်တော့မည့် ပဋ္ဌာန်း(၂၄)ပစ္စည်း မြန်မာပြန်အတွက် ရှေးဦးစွာ ပဋ္ဌာန်းမရွတ်ဆိုမီ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းလေးတွေအကြောင်းကို ရေးသားပြီးအသိပေးမှဖြစ်ပါမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ ပဋ္ဌာန်းမရွတ်ဆိုမီ လုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုသိထားမှ ရွတ်ဆိုတဲ့အခါ နေရာကျမှာဖြစ်ပါတယ်။မသိထားရင်တော့ နေရာကျစရာအကြောင်းမရှိပါ။နေရာကျကျ အစီစဉ်ကျကျရွတ်ဆိုပါမှ အကျိုးထူး အကျိုးမြတ်များကိုခံစားရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ပဋ္ဌာန်းမရွတ်ဆိုမီ အဓိဋ္ဌာန်ပုံနှင့်သစ္စာဆိုရပုံလေးကို ရှေးဦးစွာရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ယနေ့အဓိဋ္ဌာန် ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်များကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မည်ဖြစ်၍တပည့်တော်၏ကိုယ်စောင့်နတ်၊ နေရာစောင့်နတ်၊အိမ်စောင့်နတ်၊ခြံစောင့်နတ်၊လမ်းစောင့်နတ်၊ရပ်ကွက်စောင့်နတ်၊မြို့စောင့်နတ် သာသနာတော်စောင့်နတ် စတဲ့ ဌာနအသီးသီးမှာ စောင့်ရှောက်ကြကုန်သော နတ်မြတ် နတ်ကောင်း နတ်အပေါင်းတို့အားလည်းကောင်း၊ဤနေရာ ဤဌာနမှာ ရှိကြကုန်သော ဥစ္စာစောင့် သိုက်နန်းရှင် စတဲ့မြင်အပ် မမြင်အပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်၊မကျွတ်မလွတ်ကြကုန်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းကောင်း၊လောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်ကြကုန်သော ဓတရဋ္ဌ၊ဝိရူဠက၊ဝိရူပက္ခ၊ကုဝေရဟူသော နတ်မင်းကြီးလေးပါးစသည့်ဖြင့် (ပင့်ဖိတ်သင့် ပင့်ဖိတ်ထိုက်သော)ပုဂ္ဂိုလ်များကို နာမည်တပ်၍ ပဋ္ဌာန်းတရားနာကြားဖို့လာရောက်နာကြားကြပါကုန်လော့ဟု ပင့်ဖိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့တိုင်း ရွတ်ဆိုမည်ဆိုပါက နေ့တိုင်းပင့်ဖိတ်အပ်ပါတယ်။တစ်လရွတ်ဆိုမည်ဆိုလျှင်တော့ နေ့တိုင်းပင့်ဖိတ်စရာမလိုပါ။တစ်လပြည့်တဲ့ထိ မပင့်ဖိတ်ပဲနေနိုင်ပြီး တစ်လပြည့်မြောက်ရင်တော့ ပင့်ဖိတ်ထားသူများကို မိမိတို့နေရာ ဌာနသို့ အသီးသီးပြန်ကြွရန်မေတ္တာရပ်ခံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။နေ့တိုင်းရွတ်ဆိုရင် နေ့တိုင်းပင့်ဖိတ်ရမှာဖြစ်သလို နေ့တိုင်းပြန်ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်များ ပစ္စယုဒ္ဒေသ၊ပစ္စယနိဒ္ဒေသ ပါဠိတော်နှင့် မြန်မာပြန်များကို ကောင်းမြတ်သော အချိန်ခါ ဖြစ်သည့်အတွက်(ဟေတုပစ္စယောမှစ၍ ရွတ်ဆိုပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။)ရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးသည်နှင့် အမျှပေးဝေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။(သစ္စာဆိုပုံ) ။ ။ ယခုအခါ တစ်လအဓိဋ္ဌာန် ရွတ်ဆိုပူဇော်ရာတွင် ယနေ့အဓိဋ္ဌာန်အဖြစ် ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်၍(နေ့တိုင်းပူဇော်မည်ဆိုပါကလည်း)နေ့တိုင်း ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ပူဇော်ပြီးပါပြီ။ဤသစ္စာစကားကြောင့်လည်းကောင်း၊ဤပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်၏ တန်ခိုး ရှိန်စော် အာနုဘော်တို့ကြောင့်လည်းကောင်း၊ဤပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကို ရွတ်ဆိုရသော ကောင်းမှု၊နာကြားရသော ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့၏ တန်ခိုးတော်ဇော်အာနုဘော်တို့ကြောင့်လည်းကောင်း၊ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတိုင်း တပည့်တော်နှင့်ထပ်ထူထပ်မျှ ရစေဖို့ အမျှပေးဝေရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်၊ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓုခေါ်ဆိုရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့၏ တန်ခိုးတေဇော်အာနုဘော်တို့ကြောင့်လည်းကောင်း တပည့်တော်သည်(..................)ဖြစ်ရပါလို့၏ဟူ၍လိုရာဆု တစ်ခုတည်းကိုတောင်းပါ။လိုရာဆုတစ်ခု မပြည့်မချင်း ဤတစ်မျိုးကိုသာ ဆက်၍ဆုတောင်းပါ။
ကိုးကား။ ။ဒေါက်တာအရှင်ကောဝိဒါစာရ၏ ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ရေးသားတင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
Posted by talwinsuccess at 1:14 PM0comments
Posted by talwinsuccess at 2:26 PM0comments
ကျွန်တော် ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးကို အရမ်းသဘောကျလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... သူ့မှာ ချက်တင်အပြင် စကားပါပြောလို့ရတာက ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေလေးရဲ့ အားသာချက်ပါ ... လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ ဖုန်းကနေ http://www.fring.com ကိုဝင်ပြီးတော့ fring ကို ဒေါင်းလော့လုပ်လိုက်ပါ ... ပြီးရင်တော့ သူမေးထားတဲ့အတိုင်း ပါ့စ်ဝါ့နဲ့ အကောင့်တစ်ခုလုပ်လိုက် ပြီးရင် gtalk,yahoo messenger, skype အစရှိတဲ့ ချက်တင်တွေကို ကို့ရှိပြီးသားအကောင့်နဲ့ ၀င်လိုက်ပါ ... fring ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးကို ဒေါင်းလော့လုပ်လိုက်တာနဲ့ ချက်တင်တော်တော်များများကို တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ ချက်တင်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင် အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ သူတွေကိုလဲ ဖုန်းနှင့်ပြောဆိုတဲ့ အတိုင်းပြောနိုင်ပါတယ် ... ဒီ ၀ဘ်ဆိုက်လေးပေါ်လာတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး .... ဖုန်းတစ်လုံးရှိနေရုံနဲ့ ဖုန်းလိုင်းမိတဲ့ ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက် အွန်လိုင်းဝင်နိုင်တဲ့အပြင် ဖုန်းပါပြောနိုင်ပါတယ် .... ဖုန်းနှင့် ၀ဘ်ဆိုက်ကို ၀င်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာနှင့် http://www.fring.com/download/ ကိုဝင်ပါ ပြီးလျင် ဘေးနားက အကွက်လေးမှာ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် နိုင်ငံပြီးတော့ အီးမေးလ်လိပ်စာကို ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ join ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ကို့ရဲ့ ဖုန်းမှာ ဒေါင်းလော့လုပ်မလားလို့ မေးပါလိမ့်မယ် .... တစ်ခါတည်းသာ ဒေါင်းလော့လုပ်လိုက်ပါ ... အဲ့ဒီ့လောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်... တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် .. သူပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေကတော့ (ချက်တင် + ဖုန်း) ပြောလို့ရသလို ... ချက်တင် သီးသန့်ပဲ ပြောလို့ရတဲ့ ဖုန်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ် ..
get fring via pc မှာ ကို့ဖုန်းအမျိုးအစားအလိုက် ကြည့်လို့ရပါတယ် ... ကျွန်တော့ဖုန်းကတော့ မရပါဘူး ဟဲဟဲ .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ nokia 5300 ဖြစ်နေလို့ပါ ... mini fring ပဲရပါတယ် ... mini fring က ဖုန်းပြောလို့မရပါဘူး.... ချက်တင်သီးသန့်ပဲရပါတယ် ... ဖုန်းပြောလို့ ရ၊ မရဆိုတာကတော့ get fring via pc မှာ ဖုန်းအမျိုးအစားနှင့်မော်ဒယ်နံပါတ်ကို ရွေးလိုက်တာနဲ့ အောက်မှာ အသံပုံစံလေး ပြထားရင်တော့ အိုကေပါတယ် ... အသံပုံစံလေးမဟုတ်ပဲ အသံပုံစံလေးကို ကြက်ခြေခတ်အ၀ိုင်းလေးနဲ့ ၀ိုင်းပြထားရင်တော့ စကားပြောလို့မရပါဘူး .... ချက်တင်ပဲဝင်နိုင်ပါတယ် ... ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် .. အကောင်းဆုံးကတော့ nokia N73 နှင့် iphone တွေပါ .... မိသားစုနှင့်ဝေးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အလုပ်မအားတဲ့ကြားထဲကနေ ကွန်ပျူတာရှေ့မထိုင်ပဲနှင့် ဖုန်းနဲ့တင် ချက်တင်ဝင်ပြီးပြောနိုင်ပါစေဗျာ .... စမ်းကြည့်ပါဗျာ ... အဆင်မပြေတာရှိရင်တော့ naymin123@gmail.com ကို မေးလ်ပို့လိုက်ပါ ကျန်တော် ပုံနှင့်တစ်ကွ ရှင်းပြပေးပါ့မယ် ...
Posted by talwinsuccess at 2:24 PM0comments
အဲလိုရိုက်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံကုဒ်၊ ဒေသကုဒ်တွေကို ပါထည့်ပေးရပါမယ်။ gmail.com နေရာမှာ talkster.gtalk2voip.com ကို ပြင်ဆင်ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ (phonenumber@talkster.gtalk2voip.com) ဥပမာ: for UK, use 442071234567@talkster.gtalk2voip.com or for USA , use 12125551212@talkster.gtalk2voip.com
Talkster မှ ပေးပို့တဲ့ confirmation ကို instructions တွေနဲ့ အတူ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ တဘက်မှ သင်ဆက်သွယ်ချင်တဲ့သူသုံးဖို့ local Talkster number တစ်ခုကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အဲဒီနံပါတ်ကို ဖုန်းပြန်ခေါ်ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လတ်တလော အခြေအနေမှာ ရှိနေတဲ့ operating system တွေရဲ့ 64-bit နဲ့ 32-bit အကြောင်းကို တိတိကျကျ သိရှိမထားလို့ သူတို့ ( ၂ ) ဦးမှာ ဘယ်ဟာက ဘယ်သူ့ထက်ပိုကောင်းသလဲ ဆိုတာ ခွဲခြားရခက်နေမယ့် အခြေအနေမျိုး ရှိနေပြီဆိုရင် ဒီ မရေရာနဲ့ အသိစိတ်နဲ့ အတူ တဆက်တစပ်တည်း ပူးတွဲခံစားလာရတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက " 64-bit version Windows ကို တကယ်ရော ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုသင့်ရဲ့လား ? " ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ တကယ်လို့ အသုံးပြုသင့်ပြီ ဆိုရင်ရော " ဘာကြောင့် 64-bit version Windows ကို အသုံးပြုသင့်တာလဲ ? " ။ ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် သင့်တော်မယ့် အဖြေတစ်ခုဆီ ကျွန်တော်တို့ချဉ်းကပ်ကြည့်ပါမယ်။
လတ်တလော အခြေအနေမှာ Users တွေ အတော်များများကတော့ operating system အတွက်ရွေးချယ်တဲ့ နေရာမှာ အရင်က အသုံးများခဲ့ကြတဲ့ 32-bit version ကိုကျော်လွန်ပြီး အခုဆိုရင် 64-bit version ကိုပဲ သူတို့ရဲ့ စက်တွေမှာ ထည့်သွင်းဖို့ ရွေးချယ်လာကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အတော်များများကတော့ 64-bit နဲ့ 32-bit နှစ်ခုမှာ သူတို့ ( ၂ ) ခုက ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာ ခုချိန်ထိ ရေရေရာရာ မသိရှိကြသေးပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ ခုဒီ Thread မှာ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ OS အတွက် 64-bit version ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် အဓိက အကျဆုံး အရေးကြီးဆုံး ဘယ်ကွာခြားချက်တွေ ကျွန်တော်တို့အတွက် ရရှိနိုင်မလဲ ဆိုတာ အလွယ်ကူဆုံးနားလည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။
ဘယ်လို Version မျိုးများ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရှိနေပါသလဲ ??
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ ဘယ်လို Version မျိုး Run နေသလဲဆိုတာသိရှိနိုင်ဖို့ Control Panel ထဲက System properties မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို တစ်ခြားနည်းအားဖြင့်လည်း start menu ဒါမှမဟုတ် Desktop ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ Computer icon ပေါ်မှာ Right-click ထောက်ပြီး Menu မှာ ပါဝင်နေတဲ့ Properties ကနေ တဆင့်လည်း ကြည့်ရှုလို့ ရပါတယ်။ Windows7နဲ့ Vista Users တွေကတော့ System type ရဲ့အောက်မှာ ကြည့်ရှု့လို့ ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မဖြစ်မနေသိထားသင့်တာ တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ 64-bit operating system Run နိုင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPU ဟာ 64-bit ကို Suppot ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ modern CPU တွေကို သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ 64-bit operating system ကို Run နိုင်ဖို့ အတွက် အထူးအထွေ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး Quality ချထားတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေမှာတော့ 64-bit ကို support မလုပ်တဲ့ processor တွေ ရှိနေတတ်တာတွေလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
32-bit မှာ တကယ်ပဲ Memory Limit ကန့်သတ်ချက် ရှိနေသလား ??
ဘယ် 32-bit operating system မှာ မဆို ကျွန်တော်တို့တွေ အတွက် RAM ပမာဏကို 4096MB ထိပဲ နောက်ဆုံး တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ ကန့်သတ်ထား ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ အလွယ်ကူဆုံး ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ 32-bit မှာ ကန့်သတ်ထားတဲ့ တန်ဖိုးပမာဏ အရ သူဟာ နောက်တိုး ပမာဏကို လက်မခံနိုင်တော့လို့ ပါပဲ။ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ စာဖတ်သူတစ်ချို့ကတော့ ဒီနေရာမှာ PAE ( PAE ဆိုတာ processor technology တစ်ခု ဖြစ်ပြီး လက်ရှိသုံးနေတဲ့ OS မှာ Memory ကို အနည်းငယ် ထပ်မံတိုးမြှင့်ပြီး သုံးနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းပညာကို ခေါ်ပါတယ်။ ) ကို Support ပေးတဲ့ Modern Chips တွေကို ထောက်ပြပြီး စောဒက တက်စရာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲလို သုံးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကျ applications တော်တော်များများကနေ အတည်မပြုကြသေးတဲ့ ရှာရခက်ခဲမယ့် special application support မျိုးတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Windows, Linux နဲ့ Mac OS X တွေမှာ အသီးသီး မတူညီကြတဲ့ ပြဿနာ ရပ်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲတာကတော့ Windows-specific problem ပါ။ 32-bit Linux နဲ့ Mac OS X မှာလည်း သူတို့အတွက် တူညီတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ ဆိုတာ ရှိနေပါတယ်။ 32-bit Linux က extra memory ကို ထပ်မံတိုးမြှင့် အသုံးနိုင်ဖို့ လမ်းညွှန်မှု တွေကြည့်ပြီး သွားနေရတဲ့ အချိန်မှာ Mac ရဲ့ OS X Snow Leopard ကလည်း older systems တွေမှာပါတဲ့ default 32-bit kernel မှာ Memory ထပ်တိုးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့်လည်း လုပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ ခုချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ OS ကို 64-bit Run နိုင်ဖို့ကိုပဲ ဦးတည်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
32-bit မှာ Memory တိုးနိုင်ဖို့ ကန့်သတ်ချက် တစ်ခုတည်း ရှိတာတင် ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး သူ့မှာ တခြား ပြဿနာရပ်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video card နဲ့ motherboard BIOS တွေက သူတို့ရဲ့ Space ကို 4GB ထိရောက်အောင် နေရာယူနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ပြဿနာပါ ဒီပြဿနာကြောင့် ဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲ ဆိုရင် operating system ကနေ အမှန်တကယ် သုံးရမယ့် RAM ပမာဏက လက်ရှိ မိမိစက်မှာ ရှိနေတဲ့ RAM ပမာဏထက် လျော့နည်း လာနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဥပမာပေးရရင် Windows ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Mark Russinovich က သူ့ရဲ့ 32-bit Windows မှာ RAM4GB နဲ့ 1 GB Video cards ၂ ခု စိုက်ထားခဲ့ပေမယ့် သူ့ကွန်ပြူတာကို သူ ပြန်လေ့လာကြည့်တော့ OS အတွက် ပေးနိုင်မယ့် RAM ပမာဏက 2.2 GB ကျန်တော့တယ် ဆိုတာကို သူရှာဖွေသိရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ machine မှာ Quality ကောင်းကောင်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တဲ့ video cards တွေရှိလာတာ နဲ့ အမျှ မိမိ operating system ကနေ အမှန်တကယ်သုံးရမယ့် RAM ပမာဏဟာ 32-bit system မှာ လျော့နည်းလာနိုင်မယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။
64-bit က ဘာတွေများ ကွာခြားသလဲ ??
32-bit က RAM ပမာဏ4GB ကိုပဲ လက်ခံနိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်မှာ 64-bit machine တွေကရော system memory ဘယ်လောက်များများ လက်ခံနိုင်ပါသလဲ။ ဟုတ်ကဲ့ 64-bit machine တွေက 17.2 BILLION gigabytes ထိ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာဆို ဒီ့ထက်ပိုပြီးတောင် ကျယ်ပြန့်လာဦးမှာပါ။ ဒါက ဘာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သလဲ ဆိုရင် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ video cards နဲ့ အခြားသော devices တွေကနေ OS က သုံးရမယ့် memory space ကို ခိုးယူစရာ မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ တူတူပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခု ရှိတာက Windows 64-bit Home editions တွေမှာ Licensing ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် RAM ပမာဏကို အများဆုံး 16 GB ထိ ကန့်သတ်ထားတယ် ဆိုတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တခြားသော Professional နဲ့ Ultimate versions တွေမှာတော့ RAM ပမာဏကို 192 GB ထိ တိုးမြှင့် အသုံးချပိုင်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် RAM ပမာဏ သုံးစွဲမှု များတဲ့ video editing လို virtual machines တွေလို Applications မျိုးတွေကို အသုံးချတဲ့ အချိန်မှာ 64-bit Windows က virtual memory ကို 8 TB ထိ တိုးမြှင့် အသုံးချနိုင်တာမို့လို့ ကိုယ် အသုံးပြုချင်တဲ့ Applications တွေကို ပိုပြီး သက်တောင့် သက်သာနဲ့ အသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
32-bit Applications များ 64-bit တွင် အလုပ်လုပ်ပါ သလား ??
ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှု တစ်ရပ်အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ 32-bit applications တွေဟာ 64-bit Windows မှာလည်း အဆင်ပြေစွာနဲ့ ဆက်လက် ရှင်သန်နေဦးမယ် ဆိုတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုရင် 64-bit Windows မှာပါတဲ့ WoW64 လို့ ခေါ်တဲ့ compatibility layer ကနေပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Processor ကို 32-bit ရှိရာဆီ နောက်ပြန်ဆွဲခေါ်သွားပြီး 32-bit နဲ့ 64-bit ကြားမှာ ဘယ်လိုအချိန်းအပြောင်း လုပ်ဆောင်ရမယ် ဆိုတာ သူက စီမံပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ 64-bit environment တွေမှာ 32-bit software တွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အဆင်ပြေပြေနဲ့ Run နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့ ချွင်းချက်လေးတွေတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။ 32-bit device drivers တွေနဲ့ low-level system applications တွေဖြစ်တဲ့ Antivirus လိုမျိုး နောက်ပြီး တခြား Windows မှာရှိနေတဲ့ software မျိုးတွေ ၊ တစ်ချို့ media applications တွေကတော့ 64-bit နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီပြဿနာအတွက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ 64-bit version ကို မသုံးခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရမယ့် favorite applications တွေကို ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုမယ့် 64-bit version မှာ အသုံးပြုလို့ ရမရ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကြိုတင်စစ်ဆေးလေ့လာ ပြီးမှ အသုံးပြုသင့်မသင့် ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
64-bit က RAM ကို နှစ်ဆ အသုံးပြုတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ??
တစ်ချို့ကတော့ 64-bit Windows တွေဟာ 32-bit Windows တွေထက် နှစ်ဆလောက် ပိုမြန်တယ်လို့ ယူဆနေကြတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ချို့ သူတွေက 64-bit Windows တွေဟာ RAM ကို နှစ်ဆတိုးပြီး အသုံးပြုတယ်လို့ယူဆနေကြ ပါတယ်။
ဒီယူဆချက်ကို အတွက် ရှင်းရရင် 64-bit Windows တွေဟာ extra memory ကို နဲနဲ ပိုယူတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပိုယူတယ်ဆိုတာကလည်း များပြားလှတဲ့ RAM ပမာဏ အတွက် ညွှန်းဆိုနိုင်ဖို့ memory pointers က နဲနဲ ပိုယူထားတဲ့ သဘောပါပဲ .. နှစ်ဆလောက် သုံးတယ်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာနဲ့ သဘောတရားတူမလဲ ဆိုရင် ရှေးကျတဲ့ စာကြည့်တိုက် တစ်ချို့ဆီ ကျွန်တော်တို့ သွားကြည့်တဲ့ အခါ ( ကျွန်တော် ဌားရမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စာကြည့်တိုက်တွေမှာတော့ ဤစနစ်မျိုး မကြုံခဲ့ဖူးပါ။ ) library ထဲက ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်စာအုပ်တွေထားရှိတယ်ဆိုတာ ညွှန်းဆို ဖော်ပြတဲ့ ကဒ်တွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဖိုင်မျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲမှာ အဲလိုကဒ်ပေါင်း တစ်ခုမက ရာနဲ့ချီရှိနေလည်း library ဆိုတာကြီးက နှစ်ဆပိုကြီး မသွားဘူး မလား။ ကိုယ့်ဆီမှာ အဲလိုကဒ်ပေါင်း ရာနဲ့ ချီရှိနေရင် library ထဲက ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်စာအုပ်ကို ဘယ်လို သွားရောက်ဖတ်ရှုလို့ ရပြီ ဆိုတာ အလွယ်တကူ ပိုပြီးတော့တောင် သိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဆိုလိုတာက RAM ဆိုတဲ့ ကဒ် ပမာဏ များလာလို့ Extra memory ဆိုတဲ့ Library ကြီးက ၂ ဆတိုး ကြီးမသွားပါဘူး။ ကွန်ပြူတာ သဘောအရ extra memory ကို နဲနဲ ပိုယူတယ် ဆိုပေမယ့် အသုံးချဖို့ ပိုပြီး လွယ်ကူလာစေပါတယ်။ ဒီသဘောပါပဲ။
64-bit Windows တွေဟာ operating system အတွက် drive space ပမာဏ ပိုတိုးယူဖို့ လိုမယ် ဆိုတာရော ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား။
အဲတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ 64-bit Windows ရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ သူ့ရဲ့ အခြေခံ OS လည်ပတ်နိုင်ဖို့ အတွက် GBs ပမာဏ အနည်းငယ် ထပ်မံတိုးမြှင့် အသုံးချပေးဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ကာလတွေမှာ သိုလှောင်နိုင်စွမ်းပမာဏ အရမ်းများတဲ့ HD တွေ ရှိနေတာ မှန်ပေမယ့် မိမိလည်ပတ်နေရတဲ့ ဝင်ငွေပမာဏနဲ့ ချိန်ဆပြီး ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ ... အခြေခံအားဖြင့် 64-bit Windows နဲ့ 32-bit Windows နှစ်မျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ဟာကို သုံးသင့်ပါသလဲ ??
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ PC အသစ် တစ်လုံးကို RAM 4GB နှင့်အထက် ကျော်လွန်ပြီး မှာယူမယ် နောက်ပြီး စက်မှာ video card ကောင်းကောင်းကိုလည်း ဆင်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားမယ် ဆိုရင်တော့ စက်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Memory ရဲ့ စွမ်းပကားကို အပြည့်အဝ အသုံးချခွင့် ရနိုင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Windows မှာ 64-bit version ကို အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ မှတ်ထားပေးပါ 64-bit မှာမှ Home versions ကို အသုံးပြုမယ် ဆိုရင် RAM ပမာဏကို 16GB ထိပဲ support ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ( အတော်များများ အတွက်တော့ 16GB ဆိုတာလည်း နဲတော့ မနဲလှပါဘူး။ )
ပထမမေးခွန်း အတွက် အကြောင်းအရာက ပြည့်စုံစေချင်လို့ ထည့်သွင်းလိုက်ပေမယ့် အတော်များများတော့ မိမိကွန်ပြူတာဟာ x86 (32-bit) လား x64 (64-bit) ဆိုတာ ခွဲခြားတဲ့နည်းကို သိကြပါတယ်။ Windows XP မှာတော့ တော်ယုံ ဘယ်သူမှ 64-bit ကို သုံးတာ သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ နောက်ပိုင်း Windows Vista ပေါ်လာတော့မှ drivers တွေ Compatibility ပြဿနာရပ်တွေနဲ့ အတူ 64-bit Processor ကို သတိပြုမိလာကြပြီး ခုနောက်ပိုင်း Windows7ခေတ်မှာတော့ လူအတော်များများ 64-bit processing ကို ကူးပြောင်းဖို့ စဉ်းစားနေကြပါပြီ။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ Windows XP ကနေ Vista ကို ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Windows XP ကနေ Windows7ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကူးပြောင်းတော့မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်မိတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်ကတော့ 64-bit ကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ??
ပထမဆုံး အနေနဲ့ 32 နဲ့ 64 ဆိုတဲ့ ဂဏန်းတွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တိတိကျကျ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ဒီ 32-bit နဲ့ 64-bit ဆိုတဲ့ ဂဏန်းတွေက Memory ( RAM ) နဲ့ Processor ကြားမှာ ရှိနေတဲ့ Data Bus Width ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ မြင်နေရတဲ့ အတိုင်း 64-bit ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ Data တွေကို Transfer လုပ်တဲ့ အခါမှာ 32-bit ထက် ၂ ဆလောက်နီးပါး စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ပိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ 32-bit Vista ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား ဘာပဲ သုံးသုံး ၊ Memory ကို ထပ်မြှင့်ချင်မယ် ဆိုရင် အများဆုံ3းGB ထိ ( ကိုယ့်စက်မှာ4GB ရှိမယ် ဆိုရင်တောင် ) ပဲ တိုးမြှင့်လို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာက အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ 64-bit Windows တွေမှာတော့ Memory ကို 128 GB ထိ တိုးမြှင့်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ( ခြွင်းချက်တွေတော့ ရှိပါတယ် အပေါ်မှာ ဖော်ပြပြီးသားမို့ မဖော်ပြတော့ပါ။ ) Standard Users တွေ Developers တွေ နောက်ပြီး Service providers တွေဆိုတာလည်း 64-bit processors တွေအတွက် drivers တွေနဲ့ တစ်ခြား support တွေကို ခုမျက်မှောက်ခေတ်မှာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လာကြပါပြီ။ ဒါကြောင့် 64-bit processor ဆိုတာ မရှေးမနှောင်းမှာ ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာနိုင်စရာ အလားအလာ များစွာ ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် လတ်တလောမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာဟာ old Windows XP ဒါမှမဟုတ် Vista နဲ့ ဖြစ်နေခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ processor တွေဟာ 64-bit ကို capable ဖြစ်မဖြစ် ဘယ်လို ရှာဖွေသိရှိနိုင်ပါမလဲ ??
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာဟာ 64-bit ကို capable ဖြစ်မဖြစ် သိရှိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းပေါင်း မနည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ စက်ရဲ့ လတ်တလော system type ကို မြင်ရပါပြီ။ ကျွန်တော် အနီရောင်နဲ့ ဝိုင်းပြထားတဲ့ နေရာမှာ 64-bit capable ကို Yes လို့ ပြထားတာ မြင်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ လတ်တလော အခြေအနေမှာ 64-bit ကို သုံးနေပြီးသား ဆိုရင်တော့ System type မှာပဲ 64-bit operating system ဆိုပြီး ဖော်ပြထားမှာ ဖြစ်ပြီး 64-bit ကို capable ဖြစ်လား မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတာတော့ ဖော်ပြထားပါရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနည်းနဲ့ အဆင်မပြေသေးဘူး ဆိုရင် နောက်ထပ်နည်းတွေလည်း ကျန်ရှိပါသေးတယ်။
HKEY_LOCAL_MACHINE\_HARDWARE\_DESCRIPTION\_System\_CentralProcessor\_0 ရှိရာဆီ တဆင့်ပြီး တဆင့် ဝင်ပါ။ ProcessorNameString ကျွန်တော်တို့ Processor ရဲ့ Name ကို မြင်နိုင်ပြီး Identifier မှာတော့ 64 ဆိုပြီး ပြနေရင် ဒါ 64-bit ကို Run နေတယ် တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရရင် 64-bit capable ဆိုတာ သိသာပါပြီ။
ဒီနည်း အတွက်ကတော့ Start > msinfo32.exe ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်ပါ။ System Information page ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့ထဲက System Type ဆိုတာမှာ x64 ကို Run နေသလား x86 ကို Run နေသလား ဆိုတာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီနည်းကလည်း အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို မိမိစက်မှာ 32-bit လား 64-bit လား သေသေချာချာ ကွဲကွဲပြားပြား မသိသူတွေ အတွက် ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ပါ။ 64-bit capable ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ အတွက်တော့ အဆင်မပြေပြန်ပါဘူး။ အဲတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နောက် တစ်နည်းကို ဆက်သွားကြည့်ပါဦးမယ်။
CPUZ ဆိုတာ ပေါ့ပါးတဲ့ utility တစ်ခု ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ စက်မှာ ရှိနေတဲ့ CPU (Processor), Cache, Mainboard, Memory, SPD စတာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တိကျတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ CPU tab အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ instruction ကနေ တဆင့် EM64T ဒါမှမဟုတ် AMD64 ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေ ပါမပါရှာပါ့မယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ Processor က Intel Processor ဖြစ်မယ် ဆိုရင် EM64T လို့ ဖော်ပြပြီး AMD ဖြစ်မယ် ဆိုရင်တော့ AMD64 ဆိုပြီး ပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပြထားတာ တွေ့ရင် ကျွန်တော်တို့ Processor က 64-bit ကို Capable ဖြစ်ပါပြီ။
ခု ကျွန်တော် ဆွေးနွေးခဲ့သလောက်ဆို 64 bits နဲ့ 32 bits OS တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်း သိပြီ ၊ ကွာခြားချက်တွေကိုလည်း သိနိုင်ပြီ။ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာက CPU ဟာ 64-bit Capable ဖြစ်လား မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတာလည်း သိနိုင်ပြီ။ နောက်ဆုံး တစ်ခု စဉ်းစားဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရော 64-bit operating system ကို ကူးပြောင်းဖို့ သင့်ပြီလား ??
MF မိသားစုဝင်များ အားလုံး နည်းပညာကဏ္ဍမှာ ပျော်မွေ့နိုင်ကြပါစေ။
32-bit နဲ့ 64-bit OS တွေရဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်တော်သိသလောက် ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်.... 32-bit နဲ့ 64-bit တို့ရဲ့ ခြားနားချက်က ကွန်ပြူတာရဲ့ CPU (central processing unit) က သတင်းအချက်အလက် (information) တွေကို တွက်ချက်နိုင်တဲ့ပမာဏ (အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏ) ခြားနားချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.... 64-bit processor က တစ်ကြိမ် အလုပ်လုပ်ရင် 64 bit (2^64= 18,446,744,073,709,551,616) ပမာဏ data တွေကို အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့ 32-bit processor ကတော့ 32 bit(2^32= 4,294,967,296 )ပမာဏ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် 64-bit စနစ်က လုပ်ငန်းတိုင်းကို 32-bit ထက် ပိုအလုပ်လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပါ... ကျန်တဲ့ computer တစ်ခုလုံးရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ speed တွေအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်.... (ဥပမာ CPU ရဲ့ speed ကဘယ်လောက်မြန်မြန် အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့)...နောက်ပြီးတော့ အသုံးပြုတဲ့ application တွေရဲ့ designed ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်... အသုံးပြုတဲ့ application က 32-bit အတွက်ပဲ designed လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် 64-bit မှာလည်း ပိုပြီး ထူးခြား မမြန်လာနိုင်ပါဘူး.... အခြေခံကျတဲ့ အချက်ကတော့ အချို့သော CPU ကို ခက်ခဲရှုပ်ထွေးစွာ အလုပ်လုပ်စေသော CAD(computer-aided design) ကဲ့သို့သော application တွေက 64-bit စနစ်အတွက် ပြုလုပ်ထားပြီး 32-bit ထက်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်...
64-bit စနစ်က RAM (Random Access Memory) ကို 32-bit ထက်ပိုပြီး အသုံးပြုပါတယ်... 32-bit စနစ်မှာ RAM ကို4G အထိတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်(သို့သော်4G အပြည့်သုံး၍ မရပါ.. 3.4 G လောက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..) 64-bit မှာတော့ RAM ကို များစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... (OS အလိုက် Version အလိုက် အများဆုံး အသုံးပြုနိုင်သော RAM ပမာဏ ကွာခြားပါသည်...ဒီနေရာ မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်..) RAM ကို များစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် 64-bit က 32-bit ထက် ပိုမြန်မြန်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်....
Applications အများစုဟာ 32-bit အတွက် designed လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ 64-bit မှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် Anti-virus programs တော်တော်များများနဲ့ Hardware Driver တွေကတော့ သုံးလို့မရပါဘူး.... အဲဒါကြောင့် printer သို့မဟုတ် အခြားသော hardware တွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Drivers တွေကို 64-bit Drivers တွေသာ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...Windows7(64-bit) မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Anti-virus programs တွေကို ဒီမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင် သလို အသုံးပြုလိုတဲ့ Software နဲ့ Hardware တွေကိုလည်း Windows7Compatibility Center မှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ....ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း 64-bit ကို မသုံးဖူးသေးပါခင်ဗျာ... ဆွေးနွေးချက်တွင် လိုအပ်တာများရှိခဲ့ရင် ဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးပေးကြပါခင်ဗျာ.
ref : http://www.myanmarfamily.org/forum/showthread.php?t=18742
Posted by talwinsuccess at 8:46 PM0comments
ကောက်ဦးကောက်သစ်တွေ ပေါ်စ တပို့တွဲလရာသီချိန်ခါ ရောက်လို့လာပါပြီ........။
မြန်မာ့ဆယ်နှစ်လရာသီထဲမှာ တပို့တွဲလ ထမနဲ့ထိုးပွဲဆိုတဲ့ ပွဲတော်ရက် ထမနဲထိုးပွဲကျရောက်ရာ တပို့တွဲလလဲ
ရောက်လို့လာပြီမို့ တမနဲလေးတွေ ထိုးရအောင်..........။
ပြည်မြန်မာထဲမှာ နေထိုင်သူတွေအတွက် ထမနဲဆိုတာ လွယ်ကူစွာ ရနိုင်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာဖြစ်ပေမဲ့
အိမ်ဝေးသူပြည်ပရောက်တွေအတွက် စိတ်ကူးယဉ်ပြီး မှန်းဆ စားသုံးနေရတဲ့ မြန်မာ့၇ိုးရာ အစားအစာပါ...။
ထိုကြောင့် ယခု ထမနဲထိုးနည်းမှာ ပြည်ပရောက်မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာကိုလွမ်းနေသူတွေအတွက် ရည်၇ွယ်၍
ကိုယ့်အိမ်ထဲက ဂက်စ်မီးဖိုလေးမှာ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လေး ထိုးမှာ ဖြစ်တာကြောင့်အနည်းငယ်သော
၇။ လေးညှင်းပွင့် (မထည့်လဲရ၏)
၈။ ငရုတ်ကောင်း (မထည့်လဲရ၏)
၁၀။ ရေနွေး (မြန်မြန်လေးကျက်အောင်နော်..)
ပထမဦးစွာ ကောက်ညှင်းဆန်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး နာရီအနည်းငယ် စိမ်ထားပါ...။
အုန်းသီးကို အစိပ်လေး တွေ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရပါပေမဲ့ အချိန်မပေးနိုင်သူတွေအတွက် အုန်းသီး ခြစ်စက်က
ရလာတဲ့ အတိုင်းသာ အသုံးပြုလျှင်ရပါ၏...။
မြေပဲဆန်ကို လှော်ပြီး အခွံချွတ်ရမည်..။ သို့သော် အမြန်နည်းလဲဖြစ် မြေပဲဆီနံ့လေးလဲ သင်းနေစေရန် မေက
ထမနဲထိုးသည့်ဆီထဲ မြေပဲဆန်အစိမ်းကို တစ်ခါထဲ ထည့်ကြော်လိုက်၏..။ နှမ်းစိမ်းကိုလဲ တစ်ခါထဲ
မြေပဲနှံ့လေးနှင့် နှမ်းနှံ့လေးသင်းနေသည့်ဆီပူထဲမှာ ဂျင်း၊(လေးညှင်းပွင့်၊ငရုတ်ကောင်း)ထည့်ပြီး
ကောက်ညှင်းဆန်ကိုပါ တစ်ခါထဲ ထည့်ကြော်လိုက်ပါ..။
ကောက်ညှင်းဆန် အညိုရောင်သန်းလာချိန်မှာ ဆားအနည်းငယ်ထည့် ရေနွေးကို လိုသလောက်ထည့်ပြီးရင်
အဖုံးလေးအုပ်ထား မီးလျှော့ပြီး ခဏနပ်ထားလိုက်ပေါ့..။
ရေတော့ မများစေနဲ့နော်...ဆန်ပြုတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်..ရေနွေးက လိုရင် ထပ်ထည့်လို့ရတယ်...။ နိုင်ငံခြားမှာ
အသုံးပြုနေတဲ့ ယိုးဒယားက ဝင်လာတဲ့ ကောက်ညှင်းတွေက အရမ်းပျော့လွယ်တယ်..။
ရေလဲခန်းပြီး ကိုယ့်ထမနဲကောက်ညှင်းလေးလဲ အနေတော်ဖြစ်ပြီးဆို ဂက်စ်မီးဖိုလေးပိတ်
ကဲ စားပွဲပေါ်ကို ရောက်လာတော့မည့် ထမနဲလေးကို အားရပါးရ စားရအောင်..........။
အမိမြန်မာပြည် တပို့တွဲလ အလွမ်းပြေ ထမနဲလေးကို မိသားစုကင်းမဲ့စွာ တစ်ကိုယ်တည်းမစားချင်ရင်တော့
Posted by talwinsuccess at 1:57 PM0comments
Posted by talwinsuccess at 1:11 AM0comments